Ga nke Ọma site na Akụrụngwa Jiri Akụrụngwa | Martech Zone
Ga nke ọma site na Akụkọ eji eji akpaaka
Satọdee, Nọvemba 29, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Na ọrụ m, anyị na-ahu nagide Salesforce dị ka ngwá ọrụ mmekọrịta anyị na ndị ahịa (CRM). Ahịa bụ otu n'ime usoro ndị ahụ dị egwu nke nwere ike ịme ihe ọ bụla, mana ọ na-abụkarị chọrọ mgbalị ụfọdụ iru ebe ahu.
Otu n'ime nnukwu mbọ m na-ahụ na Salesforce na-aga n'ihu bụ mkpesa ojiji ịre ahịa email na-ezigara ndị ọrụ ọ bụla kwa ọnwa. Akụkọ ndị ahụ na-enye ụfọdụ nghọta n'akụkụ nke ngwa ahụ ha na-eji ya eme ihe yana mpaghara ndị ọzọ nwere ike inyere ha aka.
Ozi akpaaka email na-ejedebe na ngalaba 4:
Ọ bụ ezie na atụmatụ ịre ahịa email na nke a dị oke mma, achọpụtara m nkọwa dị na ngalaba nke ọ bụla enweghị arụmọrụ ma ọ bụ ịdị mfe nke mmejuputa. Can nwere ike pịa site na nke ọ bụla na isiokwu na email iji nweta nkọwa ndị ọzọ na ihe atụmatụ ahụ na-enye. Ebuli, dịka ọmụmaatụ, nwere ndụmọdụ 15 n'ime email m. Imirikiti ndụmọdụ ndị a na-adọrọ mmasị mana enweghị m ike ịchịkwa itinye ụfọdụ n'ime ha n'ọrụ.
Nke a bụ nnukwu usoro ịre ahịa email nke m ga-agba onye ọ bụla nọ na Software dị ka ụlọ ọrụ Ọrụ iji mejuputa; Agbanyeghị, aga m eme aro ndị a:
Mee ya ka odi nfe. Aga m akwado otu ihe maka ngalaba nke ọ bụla… otu ihe iji mejuputa, otu iji mee ka ọ sie ike, otu iji bulie, otu iji gbasaa.
Ohere azụmahịa. Na ihe ọ bụla, m ga-enye ohere azụmaahịa ma ọ bụ ọmụmụ gbasara onye ahịa ọzọ na-eji ihe ahụ.
Etu esi amalite. Ugbu a ha mechara nwee mmasị gị, ụfọdụ ozi ịkpọtụrụ maka onye ị ga-agbaso maka enyemaka ga-abụ ihe ezi uche dị na ya.
Site na akpaghị aka na itinye usoro ịre ahịa email dị ka nke a, ị na-enye ndị ahịa gị ngwaọrụ maka ihe ịga nke ọma. Na nloghachi, mmejuputa nke ngwanrọ gi gha eme ka ojiji di nma na nsonaazụ ahia - ohere di uku maka ohere di elu na njigide ndi ahia. Ọ bụrụ na ị mejuputara usoro akpaaka dịka nke a, mee ka m mara. Ọ ga-amasị m ịnụ nsonaazụ ya!
My mmụọ nsọ maka nke a post bụ Chantelle na Ngwakọta, ndị na-adịbeghị anya na-emejuputa a Ndụmọdụ a Day email maka ndị ahịa ya ịbanye. N'aka nke ọzọ, ndị ọrụ (ma ọ bụ ọbụna ndị na-abụghị ndị ahịa) nwere ike ịbanye na Ntuziaka Kwa ụbọchị maka ịde blọgụ azụmahịa na Twitter!
Tags: nchịkọta ọdịnayaNwachukwu.lyAkụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Izu ụka a: Indianapolis mmalite izu ụka
Nov 30, 2008 na 9:29 PM
M ka na-echeta otu Hotmail si eme nnukwu iti 10 afọ gara aga. Ha na-eji njikọ mbinye aka na email nke onye ọrụ ọ bụla iji gbasaa okwu ahụ gburugburu ụwa nke na-efe ha ngwa ngwa. Ekwenyesiri m ike na ịre ahịa email bụ usoro ịzụ ahịa dị mma mana ijikwa igbe spam ga-abụ talent ọzọ.
Nov 30, 2008 na 11:20 PM
Anyị na-eji ahịa ahịa na ọrụ ikpeazụ m, yana ejiri m n'aka na ọ bụrụ na edozi ya nke ọma ọ nwere ike ịba uru, achọpụtara m na njirimara onye ọrụ enweghị ike iji ya rụọ ọrụ. Nke ahụ kwuru, anaghị m eji ya maka ahịa, ana m eji ya maka ahịa. N'oge ụfọdụ ọ ga-amasị m ịhụ ka CRM na-etinye ọnụ na mgbasa ozi mmekọrịta. Nke a ga - aba uru baara m uru. Data dị nnọọ abụghị àgwà m. Mmekọrịta ka amasị m.